Wenger oo markasta qamaara. | Qubanaha	Home
Friday, August 17th, 2012 | Posted by admin Wenger oo markasta qamaara.
Macalinka gunners ayaa ku kalsoon ciyaaryahanada Giroud iyo Podolski inay buuxin Karaan booskii al laacib Robin Van Persie uu ka faarujiyay garoonka Emerates ay ku ciyaarto naadiga the gunners.
Macalinka arsenal waa Arsene wenger ayaa qiray in qamaarkii ugu weynaa uu ciyaaray Ka gadaal markuu robin van persie uu ka iibiyay kooxda Manchester united, macalin Wenger wuu dareensanyahay sida taageerayaasha arsenal ay aaga caroodeen falkaas Wenger uu ku qamaaray.
Kaptankii hore ee kooxda arsenal ayaa so gaba gaboobay heshiiskii uu kula wareegi lahaa Kooxda munchester lacag gaareesa 24 milyan si rasmi ahna u tagy gegada red divels ay Ku ciyaaraan subaxnimadan jimcaha ah.
Taageerayaasha kooxda arsenal ayaa la niyad jabsan ka gadaal markii ay waayeen Laacibkoodii sanadkii hore ku guuleeystay gool dhalinta horyaalka England ee xili Ciyyaredkii aynu kazoo gudubnay Van Persie ayaa sanad kaga haray heshiiskiiuu kula Jiray kooxdiisii hore ee arsenal una diiday inuu heshis cusub u saxiixo kooxdiisii hore ee Arsenal.
Arsene wenger waxaa kale uu ogyahay in taagerayasha weli aysan ka kabsan hilowgii Ciyaaryahanadii horey aaga hayaamay kooxdaas sida halyeygii arsenal thierry henry iyo Cesc Febricas .
Wenger mar uu shir saxaafadeed uu kaga hadlay ayuu yiri” waan ogahay in aan qamaaray Laakin waxaynu heysanaa qaab aynu ku xalin karno arintaas asagoo markaa ula jeeday Ciyaaryahano buuxin kara booska van persie ayeynu heysanaaa waxuu kaloo raaciyay Waan ogahay dadka na taageera weynu dhaawacnay laakin waxeenu l;eenahay weli Waxeenu heysanaa ciyaaryahano tayo leh.”
Wenger waxuu yiri”hadii aad fiiriso tirade ciyaaryahano aynu heesano, waxaan soo Ibbsanay ciyaaryanaho wax tar leh, waxaan soo ibsanay ciyaaryahano goolkal dhalin karo “
“Horay waxaan u waanay ciyaaryahano caalami ah markastana waan is badbaadinaaa”
Short URL: http://www.qubanaha.com/?p=3013